Ogaden News Agency (ONA) – Xisbiga Talada Dalka K. Africa Haya ee ANC oo Hogaamiye Cusub Doortay.
Xisbiga Talada Dalka K. Africa Haya ee ANC oo Hogaamiye Cusub Doortay.
Posted by ONA Admin	/ December 19, 2017
Xisbiga taladda dalka Koonfur Afrika haya ee ANC ayaa hogaamiye u doortay Cyril Ramaphosa. Ramaphosa ayaa hadda ah Madaxweyne kuxigeenka dalkaasi waxuuna ka adkaaday Dlamini Zuma oo horay xaas ugu ahayd Madaxweyne Zuma.
Waxayna hadda u badan tahay in Raphamosa uu dalkaasi madaxweyne ka noqon doono doorashada soo socota ee sanadka 2019-ka. Waxaa jirtay cabsi xoogan oo laga qabay xisbiga in uu kala jabo ka hor doorashada soo socota iyadoo si wayn ay madaxda u kala qaybsanayd.
Guusha ninkan ayaa si wayn loogu dabaaldagay gaar ahaan wadooyinka magaalooyinka waawayn. Warbaahinta ayaa ku waramaysay in natiijada waxoogaa dib loo dhigay maadaama Dlamini-Zuma ay codsatay in tirinta mar kale lagu noqdo.
Cyril Ramaphosa waa 65, waxuuna si wayn uga soo horjeestay musuq-maasuqa dalkaasi saameeyay. Waxaa sidoo kale ninkani taageersan ganacsatada dalkaasi. Hogaamiyahan cusub ee xisbiga ANC waxaa sidoo kale uu taageero ka haystaa Goboladda dalkaasi. Xisbiga ANC ayaa waxaa ka dhexjirtay kala qaybsanaan weyn oo ku saabsan shirweynaha iyo waliba cida xisbiga ka dhaxli doonta Jacob Zuma.